Bhuku A Kuongorora Mazino | Optismile Yepamberi Dentistry muCape Town
Hapana Kutongwa Pano, Kungovhenekwa Kwemazino
Sezvineiwo, iwe unofanirwa kunge uchienda kuna chiremba wemazino kunoongororwa mwedzi mitanhatu yega. Nekudaro, isu tese tinoziva kuti izvi hazviwanzo kuitika. Kuongororwa mazino chinhu chinowanzo kungobva patiri. Saka hazvishamise kuti vanhu vamirire chero makore mashanu pakati pekushanya kwamazino.
Dzimwe nguva kurega kushanyira kuna chiremba wemazino kunogona kuita kuti iwe uwedzere, nekuti mumwe anganzwa kunyara nekuzviisa kwenguva yakareba. Kana, iwe ungangodaro usingade kuenda kuna chiremba wemazino, nekuti iwe wakambove nezviitiko zvinotyisa munguva yakapfuura.
Kugara uchiongorora mazino, Kuchenesa Mazino nekudzivirira kuchengetedza mazino kwakakosha mukuchengetedza mazino ane hutano uye matadza, kwete zvako chete asi nhengo dzese dzemhuri yako.
Hazvina basa kuti chikonzero chingave chei chekusaongororwa nguva dzose; tichagara tichirapa varwere vedu nekunzwisisa uye nekuremekedza. Nguva zhinji vanhu vanofunga kuti vane matambudziko emazino akaipisisa vanosvika pakuda kurapwa kushoma kana kusatombowana zvachose.
Chinangwa chedu kuOptiSmile ndechekuchengeta kudiwa kwako kwekurapwa mazino kushoma kuitira kuti tikwanise kunyemwerera iwe nemhuri yako mukana wakanakisa wekugara nzvimbo ine hutano.
Saka ndokumbirawo usazvidya moyo. Tichakubata nehanya zvakanyanya. PaOptiSmile, hapana kutonga, uye unogara uri mumaoko akachengeteka.
Kukuvadza kumuromo kunogona kuve kwakanyanya uye hakufanirwe kuregeredzwa.
Kune Pane Mashoma Mitemo Yechigunwe Kuti Uchengete Mune Nyaya YeMeno Emeno:
Kana zino rave kureruka, iwe unofanirwa kuedza kurichengeta rakanyorova kudzamara nguva yako yakatarwa - kuinyudza mumukaka kazhinji ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo.
Kana uine zino rakatsemuka kana rakachekwa, sukurudza mukanwa nemvura inodziya kuti urambe wakachena uye wozora inotonhora compress yekudzora kuzvimba.
Mazino anogona kuratidza chinetso chakakomba chemazino saka zvakakosha kuronga musangano uye kuita kuti nzvimbo yakakanganiswa iongororwe zvakakwana. Usazora aspirin yakanangana nemazino kana mazino, asi sukurudza nzvimbo nemvura inodziya nguva dzose kuti igare yakachena kudzamara wakwanisa kutiona.
Chinhu chakanakisa kuita kana paine dambudziko remeno ndere kutishanyira pane zvatinoita muSea Point. Dambudziko remeno harifanirwe kutorwa zvishoma, uye vanachiremba vemazino vakarovedzwa vanokubatsira kuwana mibairo yakanaka nekukubatsira iwe nekukurumidza sezvinobvira kuti kukuvara kuderedzwe.
Nei Zvakajairika Kuongorora Ups Zvakakosha?
Kuongororwa mazino kuchabatsira chiremba wemazino kuti aone kana uine matambudziko emazino kana matambudziko anogona kuda kutarisirwa. Nguva zhinji kuwana dambudziko pakutanga kunogona kudzivirira kuti rive rinorwadza uye rinodhura nyaya. Kunyangwe kana pasina chaiwo ekugadzirisa mazino kana basa rinodiwa pameno ako, zvinogara zvakanaka kuti uve wakachena zvakakwana uye kungokwanisa kutaura kuna chiremba wako wemazino nezve chero kunetseka kwaungave uine.
Chiremba wemazino dzimwe nguva anokuraira iwe nezve maitiro ari nani ekuchengeta mazino kuenda kumberi uye kuti izvo zvawanga uchiita kusvika parizvino yanga iri nzira yakanakisa yekutarisira mazino ako uye matadza.
Chii Chinotarisirwa Nekutarisa kumusoro?
Kuongororwa mazino kwakajairika hakungarwadzi, asi zvinoenderana nekuti nei wauya kuna chiremba wemazino. Kana iwe uri kuuya kuOptiSmile kune rimwe dambudziko ipapo kubata nenyaya yacho ichave iri danho rekutanga kuna chiremba wako wemazino. Kazhinji chiremba wemazino achaita zvinotevera panguva yekutarisa kwakajairwa:
Bvunza nezve hutano hwako uye kuti wanga uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchisangana nahwo chero matambudziko kubva pawakashanya kwekupedzisira kuna chiremba wemazino
Wongorora muromo wako, mazino uye matadza
Ita 3D mazino X-ray, kana zvichidikanwa
Isu tinotorawo mifananidzo yedhijitari yemuromo wako
Ita yakachena kana zvichidikanwa & gadzirisa chero matambudziko epakarepo
Kukupa rairo pahutano hwako hwemazino kuenda kumberi, asi zvakare nezve mararamiro zvinhu zvinogona kukanganisa mazino ako uye matadza
Kurukurai kana muchizoda kuuya rinotevera, kana richikurumidza kupfuura rakakurudzirwa mazuva ekuongorora. Dzimwe nguva dzimwe nguva dzekugadzwa dzinogona kudikanwa semhedzisiro yekutarisa kwako.
Usati watarisa iwe wakasunungukawo kutaura nesu kuburikidza neWhatsApp, email kana runhare, saka hapana kana kushamisika. Izvi zvinonyanya kubatsira kana iwe uchinzwa kusagadzikana zvishoma nezveako anotarisira kushanya.
Isu tinotarisira zvakanyanya kuti tione kuti maitiro edu akaita seanoparadza zvishoma uye asingarwadzise sezvinobvira. Ichi ndicho chikonzero isu tinoshandisa iyo Wand inodzora kunzvenga chingamu senzwi, izvo zvinogona kuve dambudziko, kunyangwe panguva yekutarisa kwakajairwa kwatinongoita yakachena.
Tinoda kuva nevarwere vauye kuzotariswa pane kunetseka nezvechiremba wemazino achivaudza kuti havana kuuya kuna chiremba nekukurumidza. Nenzira iyi tinokwanisa kudzivirira chero matambudziko madiki kubva mukukonzeresa iwe kuomerwa nemuviri uye nemari mune ramangwana, nekuti haina kubatwa nekukurumidza zvakakwana.
Pfungwa yekuti tingangogara tichichengeta mazino echisikigo emurwere mafomati iwo hwaro hwezvose zvatinoita pakuita kwedu Chikwata chedu chine ruzivo chakazviona zvese uye chakanangana nekutsvaga mhinduro yemazino yemurwere wega wega uchishandisa yakanakisa tekinoroji yemazino iripo.
Isu takavhurikawo kumibvunzo usati wabvunza pamwe neWhatsApp, email kana runhare, kuti ugone kuwana zano rezvaunotarisira kubva kuna chiremba wemazino wedu usati wauya kuzogadzwa.
Dana ku book your appointment nhasi. Usanyanya kufunga nezvazvo. Kuenda kuna chiremba wemazino hakufanirwe kutora chihombe chezuva rako uye kana zvangoitwa iwe unogona kuzorora kuti kunyemwerera kwako kwave nechengetedzo yakanakisa inogoneka.